WARARKII UGU DAMBEEYEY-Qarax Saraakiil Ciidanka Katirsan Lagula Beegsaday Muqdisho iyo Tirada Khasaaraha.
May 22, 2019 puntlandnews Somalia, Wararka Maanta 0
Warar horudhac ah oo la helayo ayaa sheegaya in khasaare kala duwan uu geystay qaraxii xoogganaa ee goor dhow ka dhacay Koontaroolka Ciidamada NISA ku leeyihiin agagaarka taalada Daljirka Dahsoon iyo Ex Baarlamaan ee degmada Boondheere.
Qaraxa oo ahaa mid aad looga maqlay magaalada oo dhan, isla markaana qiic iyo uuro ay cirka isku shareertay, lagana arkayay meelo badan ayaa la sheegayaa inuu sababay dhimasho iyo dhaawac.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu beegsaday koontaroolka Ciidanka NISA ku leeyihiin nawaaxiga Godka Jilacow.
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa si kulul u cambaareeyey Qarax Maanta ka dhacay Bar-koontorool oo Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin agagaarka Taalada Daljirka Daahsoon.
Wasiir Maareeye ayaa ugu horreyn uga tacsiyeeyey dadkii, iyagoo ALLE dartii u Sooman ku waxyeeloobay Qarax laga soo buuxiyey gaari ayna ka soo gaartay dhimasho iyo dhaawacba, waxa uu EEBBE uga baryey dadkii ku dhintay iyagoo Sooman dhammaantood in ALLE uu siiyo Jannadiisa, kuwa ku dhaawacmayna uu uga booga dhayo.
Wasiirka Maareeye ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaraxyada ka dhacaya Magalada Muqdisho bishaan Naxariista iyo Cibaadada ee Ramadaan, waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliyeed aysan marnaba ka daali doonin badbaadinta Shacabkeeda.